डिसीनेपालको टि–२० कन्टेस्ट विजेताः सन्दिपका प्रशंशकदेखि सोमपालका डाइहार्ट फ्यान, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
डिसीनेपालको टि–२० कन्टेस्ट विजेताः सन्दिपका प्रशंशकदेखि सोमपालका डाइहार्ट फ्यान
काठमाडौं। डिसीनेपालले मलेसियामा जारी टि–२० विश्वकप एशिया छनोटको क्रममा राखेको पूर्वानुमान गर्ने प्रतियोगिताका २ विजेतालाई पुरस्कार प्रदान गरेको छ । पहिलो प्रतियोगिताका विजेता प्रदिपकुमार पाण्डेलाई १०० डलर र दोस्रो प्रतियोगिताका विजेता विजय पन्थीलाई १५० डलर पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । पुरस्कार डिसीनेपालका सम्पादक प्रमोदकुमार ढुंगानाले विजयीहरुलाई हस्तान्तरण गरे ।
पहिलो प्रतियोगिताका विजेता पाण्डे महेन्द्रनगरका हुन् । उनी अहिले काठमाडौंको कोटेश्वरमा बस्दै आएका छन् । पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययन गरेका पाण्डे क्रिकेटका फ्यान हुन् । यद्यपि उनी प्रोफेशनल क्रिकेट भने खेल्दैनन् । उनी सन्दिप लामिछानेलाई आफ्नो मन पर्ने क्रिकेटर मान्छन् । सन्दिपमा क्रिकेटको भविष्य देख्ने पाण्डेले सन्दिप विश्वस्तरीय स्टार बन्ने मान्छन् । पाण्डे गायनका सौखिन हुन । उनले गायनबाट विभिन्न प्रतियोगिता पनि जितेका छन् ।
दोस्रो प्रतियोगिता विजेता पन्थी गुल्मीका हुन् । राष्ट्रिय टिमका बलर सोमपाल कामीको गृहजिल्ला गुल्मीका पन्थी सोमपाललाई नै आफ्नो रोलमोडल मान्छन् र उनीजस्तै बन्ने सपना देख्छन् । पन्थी मिडियम पेस बलर हुन् । राजधानीको बनस्थलीमा बस्दै आएका पन्थी बनस्थलीकै जेम्स स्कुलमा अध्ययनरत छन् । अध्ययनका अलावा उनी प्रोफेशनल क्रिकेटको प्रशिक्षण पनि लिइरहेका छन् । राष्ट्रिय टिमका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सानेपामा संचालन गरिरहेको काठमाण्डु क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टरमा प्रशिक्षण लिइरहेका पन्थीले पुरस्कारमा जितेको १५० डलर क्रिकेट सिक्नमै खर्च गर्ने बताए । १५ वर्षका पन्थी हालै भएको यु–१९ राष्ट्रिय टोलीको छनोटमा पनि सहभागी भएका थिए तर छनोट भने हुन सकेनन् ।